| | ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ ဆက်လက်ဖြစ်ထွန်းနေပါက မြန်မာနိုင်ငံသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွက် “အရေးပါသော အလားအလာရှိသည့် လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်”ဖြစ်လာမည်ဟု အမေရိကန် သမ္မတ အိမ်ဖြူတော်ရှိ မဟာဗျူဟာ ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ အမျိုးသား လုံခြုံရေး လက်ထောက် အကြံပေး မစ္စတာ ဘန်ရုဒ်က သတင်းထောက်များကို ပြောဆိုသည်။ ပထဝီအနေအထားအရ အရေးပါခြင်း၊ သဘာဝ သယံဇာတများ ပေါကြွယ်ဝခြင်း၊ ထူးချွန်ထက်မြက်သော ပြည်သူလူထုများရှိခြင်းတို့ကို အမေရိကန်က အလေးထားကြောင်းနှင့် ဒီမိုကရေစီတည်ဆောက်ရေးခရီးအစတွင် အမေရိကန်တို့အနေဖြင့် အားပေးကူညီရန် အသင့်ဖြစ်နေကြောင်းလည်း ဆိုသည်။
Comment	You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> Aung Kyaw Nyunt November 18, 2012 - 3:18 pm	We feel very sorry to read this message from US White House. Their remark said Myanmar has good and strategic geographical location, wealth of natural resources and possesses talented hardworking people. What else you need to makeacountry wealthy and having respectful position in the world.